श्रीलाई छोएर गरेको वाचा भुलेर यसरी झिकिन माझी बस्तीबाट हात , ऋण लागेको बहाना ? – Gazabkonews
काठमाडौं – मानिस आधुनिक विश्वमा प्रवेश गरे पनि मानवियता भने हराएको छैन । हराउनु पनि हुँदैन । मानिसमा मानवियता कायमै रहेको संकेत दिन दुःखीहरुको सेवा र सहयोगमा अघि बढेका हातहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् । युवा क्लब हुन् वा कुनै पनि सामाजिक क्लब तथा संघ संस्था, उनीहरुले सामाजिक काममा आ-आफ्ना तर्फबाट हात बढाइरहेका छन् । यसले उनीहरुको सामाजिक कार्यमा सक्रियतालाई संकेत गरिरहेको छ । जतिसुकै विज्ञान वा प्रविधिको विकास भए पनि मानिसमा मानवियताको आवश्यकता छ ।
अरूको देखासिकी गरेर समाजसेवा गर्ने कि नाम, चर्चा र ख्यातिको मोहमा परेर समाजसेवाको ढोँग रच्ने ? फगत आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्ने कि कुनै आश–अपेक्षा नराखी मनदेखि नै गर्ने ?एक वास्तविक समाजसेवीमा सेवाकर्मबाट आउने कुनै पनि प्रतिफलको लालच भने हुँदैन, हुनुहुँदैन । आफूले आर्जन गरेको ख्याती र सम्मानलाई समाजसेवामा जोडेर त्यसबाट अन्य आन्तरिक र बाह्य फाइदा पनि समाजसेवीले हेर्दैन, हेर्न हुँदैन ।
बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकी उनले करोडौँ खर्चेर विवाह र पार्टी गरेको तथा एक क्लवमा भएको झ’गडा’मा उनको उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनलाई झनै आ’लो’चित बनाएको छ । त्यसमाथि धुर्मुस सुन्तलीको अभियानसँग आफूलाई दाँजेर माझी बस्ती निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरेपछि उनको अभियानबारे सबैको चासो र जिज्ञासा बढ्यो । तर, उनले सहयोग मागिरहँदा सो बस्ती निर्माणबाट उनले हात झि’किसकेको खुलेको छ ।